In badan baan maqalay hay-adaha xuquuqa insaanka u dooda oo jeedinaya eedaymo la xidhiidha dad xabsiyada ku jira oo jidh dil lagu sameeyey, laakiin weli lama arag qof dhintay oo la garaacayo, soomaaliya mooyee � waxaana weji gabax kala kulmay markii nin Sudani ah uu si jees �jees ah iigu yiri "Soomaalidu ma oga miyaa in qofku haduu dhintay aanu dareen iyo garasho toona lahayn"�waxaan si mintid nimo ah u iri "wixii maydka jiidayey waa caruur iyo haween�ee ma aha wax garad".
Markii dagaalkii Lubanaan iyo Yuhuudu socodey sanadii hore, waxaa barakac ba'ani ku dhacay dadkii deganaa konfurta Lubnaan oo u badnaa Muslimiin shiico ah kuwaaso u qaxay dhinaca waqooyi oo ay degaan dadka Kiristanka Maarooniyiinta loo yaqaan. Intaan qof reer koonfureed ihi soo gaarin reer waqooyigii waxay bilaabeen inay sii diyaariyaan meelihii ay degi lahaayeen waxay cuni lahaayeen iyo weliba iskuuladii caruurtoodi dhigan lahayd intay qaxootiga yihii. Nasiib xumo iyo hoog waxaa ah in soomaalidii qaxaysey iyadii is dhacday oo is kufsatay oo sida daayeerada mid ba midkuu ka xoog weynaa reebay�.sidaa ayay soomaaliya ku yeelatay dadka keliya ee inay wax istaraan iska daayee iyagii inatay qaxayeen is nabad gelin waayey.
Cabdiraxman Xariiri � Saudi Arabia
waxaana filayaa in sidii uu sheegay fanaankii caanka ah ee Ismaaciil Aw Xirsi (Alla ha u naxariistee) ay haboonaan lahayd in Siyaad Bare (Alla ha u naxariistee) loo sugo sanad kale ama labo oo ahayd intii run ahaan ka harsanayd cimrigiisa�.nasiib xumo taasi ma dhicin waxaan lagu saaray xoog iyo xabad taasoo weli u soconaya siday u bilaabatay.
Sanado badan oo dagaal ah ka dib markii Cabdi-qaasim la doortay hadii qab-qablayaashii diidanaa ay la shaqayn lahaayeen oo fursad u siin lahaayeen inuu xukunkiisa ku balaariyo soomaaliya, maanta wadanku sidan waa dhaami lahaa�laakiin taas ilaahay kama dhigin ee lugtay qabteen.
Waxaana filayaa in hadii qof reer "qansax" ah oo boos loo dhiibo ama loo diido wadanku ku hagaagayo horaa loo arki lahaa, burburkaas wadanka soo gaarayna ma dhaceen�.
Cabdiraxman xariri � saudi arabia
Waa ilaahay mahadii hadii mar dowladii iyo shacabkiiba garteen dhibaatada saxaafada jabhadaha isu rogtay ku hayso shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho. Wariyeyaashaas oo intooda badan barbaaray ama ku indha furay xiligii burburka iyo qabiilaysiga kana soo baxay siminaaro beeleedyo uu baabulay Yusuf Garaad ayaad moodaa inay u hamuun qabaan daadashaada dhiiga shacabka soomaaliyeed iyagoo ku hamiyayay in xamar isu rogto meel Jaxiim ah oo laga huleelo, shacab iyo dowladba��..(ilaahay kama dhigee)
Hadaba iyadoo meel kasta oo ay joogtaba saxaafadu hadaf siyaasi ah leedahay (political strategy) ayaan hadana hore loo arag saxafi doonaya in wadankiisu goob dagaal noqdo, kuwa soomaalida mooye�.
Dhacdooyinkan amaan xumida ah ee laga soo sheegayo Muqdisho ayaa waxay i xasuusiyeen nin la oran jirey Suufi Xaashi oo mar baabuur kolonyo ah oo uu watay ay u soo hoydeen tuulo ka mid ah tuulooyinka Soomaalida kana baqay in alaabta gawaarida saaran la xado inta ay hurdaan sidaa la ajligeedna isugu yeeray intii uu is lahaa waa tuug alaabta xadi doonta oo ku yiri alaabta iyo baabuurta waardiyeeya aroortii marka waagu beryana khidmadiina oo kaash ah qaata, subixii markii la toosay ayaa loo yimi alaabtii oo dhan oo aan far la saarin, markaasay tuugtii waardiye yaasha ahaa intay ku soo yaaceen Suufi ku yiraahdeen "hade waanagaa hantidii kuu xafidnay oo ku ilaalinaye xaqayagii na taabsii", Suufi baa intuu dhoosha ka qoslay yiri oo hadii intiinii tuugta ahaydba aad waardiyeyaal ahaydeen yaad ka waardiyeynayseen�.! Waxaadna moodaa in amaanka maxkamadaha la sheego inay keeneen uu si dadban u waafaqsanyahay xigmada Suufi.
Waxaan kaloo arintan wax ka waydiiyey nin ganacsade ah oo la yiraahdo Maxamed Yusuf oo si isdaba jog ah xamar u taga wuxuuna ugu yiri hadal aan la yaabay "War dhegeyso waxaan aad maqlayso wax baa la qarxiyey waxbaa la dhaawacay, hoobiyaa la soo ridey awelba way dhici jireen xiligii maxkamadaha laakiin maxkamaduhu waxay gacan bir ah ku hayeen warbaahinta wadanka kuwaaso qaarna lafahooda uga baqayeen qaarna qabiil ahaan u taageersanayeen sidaa darteen war xun lama sheegi kari jirin �.Saxaafada Xamarna waxaa lagu mashquushay xiligaas Maxay Qabatay Towradu.
Cabdiraxman Xariri � Saudi Arabia.
Wax lala yaabo ma'aha in qof ka tirsan gooni-goosatada Soomaliland la baxday uu sheego inuu neceb yahay calanka Buluuga ah ee xidigta shan geeska ahi dhexda kaga taal, laakiin weli ma aan maqal cid ku dartay weedha ah Markaan Arko Waa Naxaa��.Ka daroo dibi dhal.
5 Sababood Darteed Dagaalka Gobolka Baay Jihaad Ma�aha
Markii Ilaahay Subxaanahu watacaalaa Malaaigtiisa u sheegay inuu samaynayo Makhluuq cusub oo uu aduunka ku beerayo, sida quraanku sheegay malaigtu ma jeclaysan arinkaas iyagoo subab uga dhigay in bani�aadamkan dhoobada laga samayn doonaa ee aduunka la dejinayaa uu dhulkan cusub ee quruxda badan fasahaadin doonaan oo dhiig ku daadin doonaan. Halkaa waxaa ka cad in dhiig daadintu ama is-dilku yahay waxa ugu badan ee bani aadamku cadhada Eebe ku mutaysto keentana in dhulka iyo adoomaha eebe ku beerayba ay fasa-haadaan oo burbur.iyo nolol xumo soo wajahdo.
Iska daa hadii qofka la dilayaa uu Mulim Ashahaata oo ehlu towxiid ah yahay, waxaana xadiis rasuulku (CSW) ka sugnaaday uu ku yiri i �Aduunka oo la baabiyo ayaa ilaahay kala fudud qof muslim ah in dhiigiisa la daadiyo�. Marka Ilaahay sidaa inoo sheegay looma baahna in la leex leexiyo micnaha oo la yiraahdo dadka qaar baa Muslim sax ah qaarna waa muslim dhiman, iyadoo aynu ognahay in rasuulku (CSW) dad Munaafiqiin ah oo ogyahay aanu ogolaan jirin in waxa dhibaato ah loo geysto af iyo adin toona oo isaga iskala socdeen.
Dhinaca kale shantan qodob ee aan hoos ku sheegi doono darteed dagaalka baydhabo lala beegsaday Jihaad Islaami ah ma�aha mana buuxin shuruudaha laga doonayo in Jihaadka nadiifta ahi yeesho:-
1. Waxaynu ku jirney Bilaha La Xurmeeyo �Ashhurul Xurum� afarta bilood ee ilaahay mamnuucay in wax dagaal ah Islaamku galo waxayna kala yihiin Dulqicda, Dulxijah, Muxaram iyo Rajab, (ma hubo in ninka todobada beri qabtay ee dagaalkan huriyey uu maqlay Ashurhurul Xurum iyo inkale).
3. �In Tigree dalka laga xoreeyaa� ma noqon karto sabab jihaad loo iclaamiyo waayo xoraynta dhulku ma aha waxyaabaha qofka Islaamka ah uu naftiisa u jaro waxaana la waydiiyey rasuulka CSW qofkii dalkiisa u dhinta iyo ka qabiilkiisa u dhinta inay jidka Alle ku dhinteen iyo in kale wuxuuna rasuulku CSW ku jawaabay ninkii u dagaalamaya in kelimada alle (li�iclaali kalimati laah) korayso ayuunba jidkii alle ku dhintay.
4. Ilaahay wuxuu yiri �Walaa Talquu bi�aydiyakum ila tahlukah� gacmihiina haku raadsanina halaag markaa ardayda yar-yar ee aan weli qaan gaadhin ee dagaalka loo soo daabulay waxay muujinaysaa in la gees-maray qudsiyadii iyo karaamadii islaamku bani�aadmiga siiyey iyo in aan la dagaalamin in laga fursan waayo mooyee.
5. In aan �Gaalo� la kaashan oo aan dad aan islaam ahayn la adeegsan si loo jihaado waxaana rasuulka dhacday in mar uu nin Kirisataan (Masiixi) ahi damcay inuu Jihaad u raaco wuxuuna rasuulku si cadho ku jirto u yiri �Noqo Gaal Taageero kama rabee�. Inaguna waxaynu ognahay in ugu yaraan 2000 oo Eriteriyaan Gaala ahi ay la safan yihiin maxkamadaha taasoo muujinaysa in la laga talaabsaday mid ka mid shuruudaha Jihaadka.
Isku soo duubo dagaalkan wuxuu dhacay xili khalad ah (Ashhurul Xurum), wuxuuna ka dhacay meel khalad ah (Baydhabo Janaay) wuxuuna ku dhacay dad khalad ah (Soomaali), sidaa darteed uma sugnaanin (marka shareecada la eego) shuruudaha laga doonayo in Jihaadku yeesho, waxaana shacabka soomaaliyeed ugu yeerayaa inay nabada ka shaqeeyaan aana lagu maaweelin �Janno� kuwii ku baaqayeyba ay dayaarad ka sooraaceen.